चितवनमा गरिएको परिक्षणमा थप १४१ जनामा कोरोना संक्रमण – Saurahaonline.com
चितवनमा गरिएको परिक्षणमा थप १४१ जनामा कोरोना संक्रमण
चितवन : चितवनमा आज थप १४१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) कोभिड १९ ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा एकै दिन १४१ जनामा कोभिड १९ (कोरोना भाईरस) पोजेटिभ देखिएको हो । शुक्रबार ३७२ नमूना परीक्षण गर्दा १४१ मा पोजेटिभ देखिएको कलेजले शनिबार जनाएको छ ।
जसमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाका ८० जना रहेका छन् । त्यसैगरी रत्ननगर नगरपालिकाका नौ, कालिका नगरपालिकाका १, खैरहनी नगरपालिकाका ४, राप्ती नगरपालिकाका ३, माडी नगरपालिकाका १, ईच्छाकामना गाउँपालिकाका १ रहेका छन् ।
यसैगरी गोरखाका ३, लमजुङका १, मकवानपुरका ४, नवलपुरका २१ रहेका छन् । यस्तै, सर्लाह, तनहुँ, मोरङ, रौतहट, सुर्खेत, रुपन्देही, कपिलवस्तु, काठमाण्डौं, महोत्तरीका रहेको अस्पतालका माईक्रोबायोलोजी विभाग प्रमुख डा. अनुप पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यी सबै संक्रमित चितवन मेडिकल कलेजमै उपचारका लागि आएकाहरु रहेको डा. पौडेलले जानकारी दिनुभयो